ညစ်ညမ်းစွဲစွဲလမ်းမှုပြtheနာကိုပင်မစီးပွားထဲသို့မည်သို့ရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးမည်နည်း။ (၂၀၁၂) - သင့် ဦး နှောက်သည် Porn တွင်ရှိသည်
ကြှနျုပျတို့မညျသို့ခေတ်ရေစီးကြောင်းသို့ porn စွဲ၏ပြဿနာကိုဆောင်ကြဉ်းနိုင်သလဲ (2012)
အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုစွဲလမ်းမှု၏ပြင်းထန်။ အေးခဲသည့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖြစ်မှန်သည်ကြည့်ရှုသူများကိုပိုမိုဆွဲဆောင်နိုင်ပြီးရုပ်သိမ်းခြင်းကိုခံနေရသောကြောင့်သူတို့အနေဖြင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုစွဲလမ်းမှု၏စက်ယန္တရားနှင့်အန္တရာယ်များကိုအဓိကအကြံဥာဏ်များတွင်အဘယ်ကြောင့်မထင်ရှားစေရသနည်းဟုမေးမြန်းကြသည်။ အောက်တွင်ထိုကဲ့သို့သောလေ့လာသူတစ် ဦး ၏ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုပြန်ထုတ်ပေးသည်။ သူ၏စကားကဟုခေါ်သော site ပေါ်တွင် ppeared www.yourbrainrebalanced.com.
စွဲလမ်းမှုသုတေသနနှင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းသူများအသုံးပြုသူများ၏ဆက်စပ်မှုနယ်ပယ်ကိုမြန်ဆန်စွာမတက်နိုင်သူများအတွက်သူ၏ post အောက်ရှိလင့်ခ်များစွာနှင့်အကျဉ်းချုံးပြန်လည်ရေးသားခဲ့သည်။
ကြှနျုပျတို့မညျသို့ခေတ်ရေစီးကြောင်းစကားပြောဆိုမှုသို့ porn စွဲ၏ပြဿနာကိုဆောင်ကြဉ်းနိုင်သလဲ
ညစ်ညမ်းဆေးစွဲမှုသည်ပြaနာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ယောက်ျားအများစုသည်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကိုခံစားနေရသည်။ သူတို့အဲဒီမှာတောင်မှမသိဘူး is ထိုကဲ့သို့သောအရာ။ ဤမှတ်ချက်ကိုအခြားချည်မျှင်ဖြင့်ဖတ်ပြီးနောက်ဤမသိမှု၏အကြောင်းရင်းများကိုကျွန်ုပ်စဉ်းစားမိသည်။
ငါအစီအမံကွာအသက်မပြည့်သေးဖြစ်ကြောင်းလူမြိုးမှ porn ကိုစောင့်ရှောက်ရန်ခေါ်ဆောင်သွားဖို့လိုထင်ပါတယ်။ သူတို့ကအလေးအနက်ထားအတူတကွ porn ထုတ်လုပ်သူများရှုမြင်လေးတွေထဲက porn ကိုစောင့်ရှောက်ရန်လိုကျနာဖို့ရှိသည်အချို့ဥပဒေများထားရန်လိုအပ်ပါတယ်
ငါဒီ Impulse ကိုနားလည်နေစဉ်, ငါကသဘောမတူဘူး။ ငါထင်တယ် နိုင်ငံရေးအရ ထိုတရားလွန်ရရန်ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်, နှင့် လက်တွေ့ကျကျ ကပြenfor္ဌာန်းရန်ရန်ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်။ Porn ကိုတစ်နည်းနည်းဖြင့်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ရန်လိုအပ်သည် (မဖြစ်နိုင်သလောက် - လူတစ် ဦး ၏စွဲလမ်းစေသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံသည်အခြားသူတစ် ဦး ၏စီးကရက်စီးကရက်သောက်သော sexy စားဆင်ယင်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ၏ပျင်းစရာဗီဒီယိုဖြစ်သည်) ။ ပြီးတော့အရွယ်မရောက်သေးသူတွေကိုကာကွယ်ဖို့စနစ်တစ်ခုကိုတီထွင်ရလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်တခြားသူတွေကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်ရှုခွင့်မရကြဘူး။ ၎င်းသည်အစိုးရ၏အင်တာနက်လွှမ်းမိုးမှုအတွက်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ အမျိုးမျိုးသောဆင်ဆာဖြတ်မှုအတွက်လမ်းဖွင့်ပေးသည်။ ရပါတယ်ကျေးဇူးပါ။
ငါထင် Porn တွင်သင့်ရဲ့ဦးနှောက် အပေါ်အလေးပေး ပညာရေး အများကြီးပိုပြီးသဘာဝကျပါတယ်။ ယောက်ျားတွေပဲရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာအားဖြင့်ပြန်လည်နာလန်ထူဖို့လမ်းမပေါ် get မည်မျှစဉ်းစားကြည့်ပါ တည်ရှိမှု PMO စွဲ၏။ ပြီးတော့ယောက်ျားတော်တော်များများက "ငါသာသိရင်ငါကိုယ့်ကိုယ်ကိုချိတ်ဆက်မိမှာမဟုတ်ဘူး" လို့ပြောကြတယ် သူတို့ကဒီဟာမှန်ကြောင်းသက်သေပြကြသည်၊
သို့သော်ပညာရေးနားထောင်ဖို့လူတွေကိုလိုအပ်သည်။ ထိုသို့လူဦး porn စွဲများအတွက်အတန်ငယ်ဝတ္ထုနှင့်ရှုပ်ထွေးသော [သိပ္ပံနည်းကျ] အငြင်းအခုံစကားကိုနားမထောင်ရမယ့်အလေးအနက်စိန်ခေါ်မှုဖြစ်ပါတယ်။
အခုအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ကအင်တာနက် porn ကိုနည်းမှန်လမ်းကျမကြည့်ဘူး။ ငါတို့ကအဲဒါကိုရွံမုန်းတယ်၊ စိတ်ဝင်စားတယ်၊ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကစီးကရက် (သို့) သကြားရေလိုစွဲလမ်းစေတယ်ဆိုတဲ့အယူအဆကိုတောင်မှဘယ်သူမှမ ၀ င်စားကြဘူး။ ဤမျှလောက်များစွာသောစကားစမြည်ဝိုင်းများက 'Pervert!' ဟုကြွေးကြော်နေသည့်တစ်ဖက်မှလွဲချော်သွားသည်။ နှင့်အခြားတစ်ဖက် "Prude!" ကြွေးကြော် လိင် = အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုလေ့လာရင်းသူတို့နှစ် ဦး စလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆယ်ကျော်သက်များ၏ ဦး နှောက်ကိုအမှန်တကယ်ဘာတွေဖြစ်နေသည်ကိုမသိဘဲရှိနေသည်။
၏မြှင့်တင်ရေး YBOP ရဝုဏ်ရုံနှင့်ပတ်သက်ပြီးတိုင်းအုပ်စုတစ်စုကနေခုခံရင်ဆိုင်နေရ:
လစ်ဘရယ် သိပ္ပံပညာနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သော်လည်းမည်သည့်စကားရပ်၏အန္တရာယ်များအကြောင်းပြောနေသူအားဒူးထောက်ရန်တုံ့ပြန်မှုသည်လစ်ဘရယ်များအားတိုက်ခိုက်မှုပုံစံသို့ရောက်စေသည်။ သူတို့သည်သမ္မာကျမ်းစာမှဥပဒေပြtrying္ဌာန်းရန်ကြိုးစားနေသောဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းသူများဖြစ်သောညစ်ညမ်းသောဆန့်ကျင်သူများအားအလွန်အသုံးများသောကြောင့်မကြာခဏ (အတော်အတန်မတရားမှု) သည်ဤလူများထဲမှတစ် ဦး အတွက်ဂယ်ရီ Wilson အားမှားယွင်းစေသည်။ ဒါကြောင့်ပထမပြင်ဆင်ချက်အောက်မှာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဘာမျှအန္တရာယ်ဖြစ်စေသောစစ်မှန်တဲ့ဖြစ်နေဆဲနိုင်အောင်လစ်ဘရယ်အန္တရာယ်ကင်းဖြစ် porn လိုအပ်ပါတယ်။ ရှုပ်ထွေးသည့်အဖြစ်မှန်ကိုဖော်ပြရန်ပုံစံတစ်မျိုးသည်ကာကွယ်မှုခံထိုက်ပြီး ဦး နှောက်ကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်ကြောင်းရှုပ်ထွေးသောအဖြစ်မှန်နှင့်ကိုင်တွယ်ရန်ခက်ခဲသည်။ ဖြေရှင်းရန်လိုအပ်သည့်ပြnoနာမရှိဟုယုံကြည်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။
လွတ်လပ်သည့်လစ်ဘရယ်ဝါဒ အဖြစ်ကောင်းစွာမတ်ခြင်းနှင့်သိပ္ပံနည်းကျဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ သို့သော်၎င်းတို့၏အတွေးအခေါ်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့, လွတ်လပ်သည့်လစ်ဘရယ်ဝါဒလိုအပ်ပါတယ် အားလုံး ဥပဒေရေးရာနှစ်ဦးစလုံးဖြစ် နှင့် အန္တရာယ်ကင်း။ မူးယစ်ဆေးဝါးအားလုံးသည်တရား ၀ င်သင့်သည်။ ထို့ကြောင့်လမ်းပေါ်တွင်ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ပြုမှုနှင့်ပတ်သက်သောမည်သည့်စိုးရိမ်မှုများကိုမဆိုကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိသောအကျင့်အဖြစ်ပယ်ချရမည်။ အစားအစာအားလုံးသည်တရားဝင်ဖြစ်သင့်သည် ပြောနေတာ ကျွန်ုပ်တို့၏“ သဘာဝထိန်းကျောင်းမှု” အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အတုအယောင်တိုးမြှင့်ထားသောစားနပ်ရိက္ခာထောက်ပံ့မှု၏စွဲလမ်းစေသောအန္တရာယ်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အခွင့်အရေးများကိုဖယ်ရှားရန်ငရဲကိုဖိအားပေးနေသည်။ တကယ်တော့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုစွဲလမ်းစေနိုင်တဲ့သူတစ်ယောက်ကပညာရှင်များအနေဖြင့်၎င်းကိုမစားသုံးမီထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သောအရာများသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနုတ်လက္ခဏာဖြစ်သည်။ လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိသူများသည်မည်သည့်အငြင်းပွားမှုကိုမဆိုတားမြစ်ထားသည့်အလွန်ခိုင်မာသောစစ်ထုတ်မှုရှိသည်၊ သို့သော်ခိုင်လုံသောအကြောင်းပြချက်မှာကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောလူကိုမည်သည့်အခွင့်အရေးကိုမဆိုကန့်သတ်ရန်စဉ်းစားနိုင်သည်။
ကွန်ဆာဗေးတစ် ညစ်ညမ်းမှုအန္တရာယ်များကိုအားပေးအားမြှောက်ပြုခြင်းသည်သဘာဝမဟာမိတ်များကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ သို့သော်ထိုသို့သာသူတို့ကြည့်ရှုလေ့ရှိပါတယ် လိင်သူ့ဟာသူ အန္တရာယ်ရှိတဲ့နှင့်အာဏာရှင်ထိန်းချုပ်မှုလိုအပ်နေအဖြစ်။ နှင့်ဘာသာရေးကွန်ဆာဗေးတစ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်သိပ္ပံဆန့်ကျင်ရှုထောင့်ကနေဒီဆွေးနွေးငြင်းခုံချဉ်းကပ်။ တနည်းအားဖြင့်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ဇီဝဗေဒကို အခြေခံ၍ အငြင်းပွားမှုများ - တစ်နည်းပြောရလျှင်ရထိုက်ရသည့်တစ်ခုတည်းသောအငြင်းပွားမှုများသည်မငြင်းနိုင်ပါ။ evဝံဂေလိဟောပြောသူများအကြားလှည့်စားသောသဘောတူညီမှုမှာသဘာဝရွေးချယ်ခြင်းအားဖြင့်ဆင့်ကဲသီအိုရီဖြစ်သည် မမှန်သော လူတို့ကိုဘုရားသခင်ထံမှပယ်ရှားတော်မူသည် ဖြစ်၍၊ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်သည် porn ထက် ပို၍ အငြင်းပွားဖွယ်ရာဖြစ်သည်။ ကွန်ဆာဗေးတစ်များသည်ညစ်ညမ်းမှုကို“ ဆန့်ကျင်ခြင်း” ဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်သူတို့၏အကြောင်းပြချက်များ၊ အထူးသဖြင့်ဥပဒေကို အသုံးပြု၍ သူတို့၏ကိုယ်ကျင့်တရားကိုဥပဒေအဖြစ်ပြောင်းလဲရန်ဆန္ဒရှိခြင်းသည်အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့်ရှိသောလူများအားသာ“ ဆန့်ကျင်သော” အငြင်းပွားမှုများအားပယ်ချရန်နောက်ထပ်အကြောင်းပြချက်ကိုပေးလိမ့်မည်။ ဘာသာရေးအရလှုံ့ဆော် prudery အဖြစ်။
အမျိုးသမီးရေးလှုပ်ရှားသူများလစ်ဘရယ်များ၏အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလည်းသဘာဝမဟာမိတ်များနှင့်တူပုံရသည်။ ဖခင်အုပ်စိုးမှုသည်အလွန်အမင်းညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများထက် ပို၍ ရှင်းလင်းစွာဖော်ပြခြင်းမရှိပါ။ ညစ်ညမ်းသောအမျိုးသမီးအဆိုတော်များသည်သူတို့၏အတွေ့အကြုံများကြောင့်မကြာခဏစိတ်ဒဏ်ရာရတတ်သည်။ အမျိုးသမီးများအပါအ ၀ င်အမျိုးသမီးများ၊ အမျိုးသားမိတ်ဖက်များနှင့်ကောင်းမွန်သောကျန်းမာသည့်လိင်ဆက်ဆံမှုကိုလိုလားသောကြောင့်၊ PMO စွဲလမ်းမှုကြောင့်ဤတန်ဖိုးရှိသောဘဝအတွေ့အကြုံကိုငြင်းပယ်ခံနေရသည်။ သို့သော်အမျိုးသမီးများသည်ဤဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုတွင်မပါဝင်လိုသောအကြောင်းပြချက်သုံးခုရှိသည်။ ပထမ ဦး ဆုံးလိင်အပြုသဘောဆောင်သောအမျိုးသမီးရေးလှုပ်ရှားသူအမျိုးသမီးများသည်မည်သူမဆို၏လိင်မှုကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ အငြင်းပွားဖွယ်ကိစ္စများကိုအမျိုးသမီးများအပေါ်ဝေဖန်မှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဒုတိယအချက်မှာဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ဆိုင်ရာစိတ်ပညာကိုထင်ရှားသောအမျိုးသမီးရေးဝါဒီအားလုံးကငြင်းပယ်သည်။ သူတို့ကအဲဒါကို“ ဒါပဲ” ရှင်းပြချက်လို့မြင်ပြီးသူတို့လုပ်ချင်တာကိုလုပ်တဲ့သူတွေအတွက်ဆင်ခြေပေးတယ်။ အားလုံးသောအတွေးအခေါ်များသည်အဆင်မပြေသောသိပ္ပံကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ တတိယအချက်အနေဖြင့်ဤပြproblemနာကို“ စွဲလမ်းမှု” ဟုမှန်ကန်စွာရှုမြင်ခြင်းသည်လူတစ် ဦး ချင်းစီမှတာ ၀ န်ယူမှုအချို့ကိုယူပြီးသူ့ကိုစာနာမှုလိုအပ်သည်။ အမျိုးသမီးတိုက်ပွဲသည်ဤအရာများကိုနှစ်သက်သည်မဟုတ်။
porn အသုံးပြုသူများသည်, ဤဆွေးနွေးမှုကနေအများဆုံးအကျိုးခံစားရဖို့အနေအထား၌ရှိကြ၏ဖြစ်နိုင်သူ အလွန် စိတ်ကူးကိုခံနိုင်ရည်။ ဒီဟာကြာတာမရှည်ပါဘူး ကြော်ငြာ hominem ပင်စိတ္တဇအတွက်, မိမိစွဲနှင့်အတူရင်ဆိုင်သည့်အခါတစ်ဦးညစ်ညမ်းစှဲလမျးသူတို့ကတပ်ဖြန်မူလတန်းကာကွယ်ရေးဖြစ်လာဖို့တိုက်ခိုက်။ ED ခံစားနေရပြီးငယ်ရွယ်ယောက်ျားတွေအကြောင်းကိုကြားနာအဟောင်းတွေ porn အသုံးပြုသူများသည်များမှာ သခြော ဘေးဒဏ်သင့်သောယောက်ျားများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုနိုင်သော်လည်း၊ ပူပြင်းသည့်အစစ်အမှန်ဘဝရှိအမျိုးသမီးများအတွက်မဟုတ်ပါကအစားအစာကဲ့သို့သောအခြားအချက်တစ်ချက်မှာအလုပ်တွင်ရှိရမည်ဖြစ်သည်။ သမင်ဒရယ်သည် ဦး နှောက်ဆဲလ်များတပ်ဆင်ထားသည့်အလား၊ ခြိမ်းခြောက်သူတိုင်းအားချက်ချင်းအဓိပ်ပါယျမရှိသော၊ အဖိုးတန် porn။ စွဲလမ်းမှုနှင့်အမျှပုံမှန်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုသူသည်နေ့စဉ်ညစ်ညမ်းသောအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုနာရီပေါင်းများစွာအသုံးပြုခြင်းသည်ပြproblemနာရှိသောအပြုအမူကိုကိုယ်စားပြုနိုင်သည်ဟူသောအယူအဆကိုသူမဖွင့်မီကပင်အသုံးပြုသူသည် ED သို့မဟုတ်ပြင်းထန်သောစိတ်ဓာတ်ကျခြင်းကို“ နိမ့်ကျစွာထိုး” ရမည်။
တိုတောင်းသောခုနှစ်တွင်နီးပါး မညျသူမြှ သိပ္ပံနည်းကျထောက်ပံ့ထားသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုလူ့ ဦး နှောက်နှင့် ပတ်သတ်၍ ပြောဆိုလိုသည်။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့စကားလက်ဆုံပြောဆိုမှုမရှိဘူး
သငျသညျငါအဆိုးမြင်အထက်တွင်ဖော်ပြထားပါပြီယဉ်ကျေးမှု / မီဒီယာရှုခင်းတွေအကြောင်းဘယ်လိုထင်သလဲ
အတားအဆီးန်းကျင်အလုပ်လုပ်နှင့်ခေတ်ရေစီးကြောင်းစကားပြောဆိုမှုသို့ porn စွဲ၏ပြဿနာကိုထိုးဘို့မဆိုအိုင်ဒီယာ?
The post များ၏ END သည်